कोभिडः कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने ? कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ? « Mechipost.com
कोभिडः कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने ? कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ?
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:४०
– भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालको चाँप, मृत्युदर तथा घाटका दृश्य देखेर हामीहरुलाई तनाब भएको छ । महामारीको समयमा यस्ता समाचार नहेर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपालमा अक्सिजनको कमी भइसकेको छैन । सबै संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिने पनि होइन् । आइसीयु तथा भेन्टिलेटर खाली नभएका समाचारले पनि असुरक्षा महशुष गराएका छन् ।
सरकारले अक्सिजन बेड, आइसीयु तथा कोभिड अस्पताल थपिरहेको छ । विपत्तिको समयमा डराउने र आत्तिने हैन, कुशलतापूर्वक अघिं बढ्नुपर्दछ । अहिले परिस्थिति २० बिग्रेको छ भने हाम्रो मनस्थिति ८० बिग्रेको छ । संचारमाध्यमले पनि मनोबल बढाउने समाचार दिनु उपयुक्त हुन्छ । नकारात्मक समाचारको महामारी झनै घातक हुन्छ ।
– ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद र गन्ध परिवर्तन हुने, पखाला लाग्ने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, खाना नरुच्ने आदि समस्या भएमा वा घरमा कुनै व्यक्तिलाई कोभिड भएमा वा कुनै कोभिड भएको व्यक्तिसंग भेटघाट गरेको भएमा तथा कतै यात्रा गरेको भएमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला ।
– परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबैलाई संक्रमण सरेको अवस्था छ । सबै संक्रमित भएपनि आत्तिनु पर्दैन । लक्षणअनुसारका सामान्य औषधिले अधिकांश संक्रमितलाई निको हुन्छ । कोभिडले १० दिन केहि न केहि गाह्रो हुनसक्छ । यसका लागि मानसिक तयारी र संयम आवश्यक हुन्छ ।
– केन्द्रका अस्पतालमा धेरै चाँप हुने भएकोले सहरबाट अलिकति बाहिरका मेडिकल कलेज वा अस्पतालमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यहाँ बिरामीको चाप कम हुन्छ ।
– आफूले उपचार गराएको अस्पतालमा आइसीयु वा भेन्टिलेटर छैन भने उक्त अस्पताललाई खाली भएको ठाउँ खोजेर पठाउन अनुरोध गर्नुपर्दछ । हामी आफैले खाली आइसीयु पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । आइसीयु नपाएपनि चिकित्सक तथा नर्सको राम्रो केयर भयो भने अक्सिजन बेडमा पनि आइसीयु सरहको उपचार हुन्छ ।
– अहिले पनि ८५ प्रशित संक्रमितलाई घरमै बसेर निको भएका छन् । १५ प्रतिशतलाई अस्पतालको सुबिधा आबश्यक देखिएको छ । ५ प्रतिशतलाई आइसीयुको आवश्यकता परेको छ । मृत्युदर १ प्रतिशत मात्र छ ।
– समाचार हेरेर, सुनेर आत्तिनु हुँदैन । मनोबल उच्च राख्नुपर्दछ । कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुदैन ।
– सबैलाई थाहा नै छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण सर्दैन । (डा. पाण्डेको फेसबुक वालबाट साभार)